ငါးသေးသေးလေးများအကြွပ်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စားမျိုးလေးတွေ...ပေါပါတယ်...ကျွန်တော်က..ထိုင်းမှာ white bith လို.ခေါ်
ပြီးတော့..ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ သံပုရာသီး တစ်စိတ် ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်.အနည်းငယ်ဖြူးပြီး..၁၀ မိနစ်ခန်. နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန်.( သို.) ဂျုံ မှုန်. များများ မှာ ငါးတွေကို လူးပြီး..